Umshwalense wenze iphutha ngokusulela icala esisebenzini esisemazingeni aphansi | News24
Umshwalense wenze iphutha ngokusulela icala esisebenzini esisemazingeni aphansi
Johannesburg – Umhlaziyi wezinkundla zokuxhumana wakuleli ukholwa ukuthi inkampani yomshwalense esobishini, u-OUTsurance , awubanga nabo ubulungiswa ngesikhathi ucasha ngomsebenzi osemazingeni aphansi njengembangela yesikhangiso seFathers’ Day ‘esicwasayo’ nesisuse omkhulu umsindo kuleli.
Lokhu kube ukuphendula okutshengiska ukushaya udaka ngasohlangothini lomshwalense ukuthi ucashe ngemuva komsebenzi osemazingeni aphansi, lona ngumbono we-CEO yenkampani eyenza ucwaningo ngezobuchwepheshe, i-Strategy Worx, nophinde abe ngungoti wezinkundla zokuxhumana, uSteven Ambrose.
OLUNYE UDABA: Asabisa ngokunqamula umshwalense amakhasimende acikwe yisikhango ‘esicwasayo’
“Akusizi ukubeka iphutha lesigameko esinje ezandleni zomuntu omncane. Zonke izikhangiso kumele zigunyazwe abaphathi,” etshela iFin24.
NgoMsombuluko, iCEO yakwa-OUTsurance, uWillem Roos, uthe lesi sikhangiso esifakwe enkundleni yezokuxhumana asizange sigunyazwe yithimba labaphathi abakhulu, nokusuke omkhulu umsindo ngaso ezinkundleni zokuxhumana.
Umsindo usuke ngemuva kokuthi u-OUTSurance wenze isikhangiso seFathers’ Day nesiholele ekutheni le nkampani yomshwalense ithole okukhulu ukugxekwa ngabantu abasebenzisa uTwitter abebethukuthele beveva.
Iningi labo lisabise ngokuduba kanye nokunqamula imishwalense yabo no-OUTSurance.
Lesi sikhangiso, ebesenzelwe kuphela iFathers’ Day, besikhombisa obaba abamhlophe bechitha isikhathi nezingane zabo. Kulesi sikhangiso bekugcwele obaba abamhlophe, eyedwa kuphela owebala elinsundu.
Abantu abebethukuthele beveva kuTwitter bagxeke lesi sikhangiso ngokuthi sicwasa ngokwebala, bathi futhi sakha umqondo wokuthi obaba abamhlophe kuphela abangabazali abaqotho.